TRUTH AND PEACE: May 2010
လူဆိုတာကတော်တော်ခက်တဲ့သတ္တ၀ါ ကျနော်လည်းလူသားဆိုတော့ ခက်တဲ့အထဲကျနော်လည်းပါနေတယ် ကိုယ်မကြိုက်တာကို ကြိုက်ချင်ယောင်ဆောင်ပြီးနေပြလိုက်ရ၊ မချစ်သော်လည်းအောင့်ကာနမ်းရ၊ ရင်ထဲမရှိတဲ့စကားကို ရှိယောင်ပြောရ၊ မောလိုက်တာ၊ ကိုယ်ရပ်တည်နေတဲ့ အခြေအနေလေးတစ်ခု၊ ကိုယ့်ရဲ့ဘ၀လို့ပြောနိုင်တဲ့ပစ္စုပန် အခြေနေလေးတစ်ခု မပြောင်းသွားဖို့ ဖက်ထားတွယ်ကပ်ကုတ်ချက်ပြီးနေနေရတာ မောစရာတော့အကောင်းသား။
ပိုဆိုးတာက..အခြေနေတစ်ခုပျက်မသွားဖို့၊ အမှန်တရားကိုကျောခိုင်းလိုက်ရတဲ့အခါ၊ မှားတာကိုမှားနေပါတယ်လို့ လူသိရှင်ကြားထုတ်မပြောရဲတဲ့အခါ အဲလိုအခါတွေရောက်လာရင် လူဟာလူအဖြစ်က ဈန်လျှောပြီး တိရိစ္ဆာန်ထက်နိမ့်တဲ့ဘ၀တစ်ခုကိုရောက်သွားတယ်လို့ကျနော်ထင်နေမိတယ်။
ဟုတ်တယ်လေ..ခွေးဟာကြောက်လာရင်အမြီးကုတ်သွားတယ်၊ ဒါဆိုသူကြောက်နေပြီ ခွေးအချင်းချင်းလည်းသိတယ် လူတွေလည်းသိတယ် ဒီကောင်ကြောက်နေပြီလို့ တခြားသောသတ္တ၀ါတွေလည်းသိမှာပဲ.. ခွေးက သူကြောင့်နေပါတယ်လို့ အမှန်ကိုအမှန်အတိုင်းပြောတာ၊အမူရာပြတာပေါ့လေ၊ အဲ..ခွေးဒေါသထွက်လာရင်..ဂီး.. ကနဲအော် မာန်ဖီပြီး အမြီးထောင်၊ ဘာကောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုက်ပစ်မယ်ဆိုတာ၊ အားလုံးအသိ၊ဒါလည်းအမှန်ပဲဒေါသထွက်နေတာကိုး။
ခွေးကချစ်လာပြီဆိုရင် အမြီကလေးတလှုပ်လှုပ် တရမ်းရမ်းနဲ့ ပွတ်သတ်ကျီစယ်ပြီး ချစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ အမူရာပြတာ..ဟုတ်တယ်နော်၊
ကျနော်တို့လူတွေများ၊ အမှန်တရားကိုပြောရမှာ၊ နားထောင်ရမှာကြောက်သလားပဲ၊ ဘာလို့ကြောက်နေလဲ ဒီအမှန်တရားဆိုတာကို၊ ဘာလို့အမှန်တရားကိုချောင်ထဲထည့်ပြီး မာယာကိုအိမ်ဦးခန်းမှာထားပြီး ကိုးကွယ်ချင်နေကြတာလဲ၊၊ လေးသင်္ချေ ကမ္ဘာတစ်သိန်းပါရမီဖြည့်ပြီး ဘုရားရှာခဲ့တာ သစ္စာဆိုတဲ့ အမှန်တရားကိုပါ၊ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့မှန်တရားကိုကြောက်နေကြတယ်၊ အမှန်တရားကိုမုန်းနေကြတယ်..မမုန်းတဲ့သူနည်းပါလိမ့်မယ်၊။
မယုံရင် သူခိုးတစ်ယောက်ကို..သူခိုးလို့ပြောကြည့်..တစ်ခါတည်း ဓါးနဲ့အခုတ်ခံရသလို နာလိုက်တာ ၊နာကျည်းလိုက်တာ တခါတည်းထသသတ်မလားပဲ ကျနော့်ကိုပြောကြည့်ပါလား ခင်ဗျားအရုပ်က ဘီလူးချဉ်သီးကျွှေးထားတဲ့ရုပ်လို့ ကျနော်ထသတ်မလားပဲ အရှက်ပေးတာကိုး ကျနော်ကချောနေလို့လား? နိုး ခုနကပြောတဲ့အရုပ်ပဲ.ဒါဆိုဘာလို့ နာလိုခံခက်ဖြစ်နေလဲ၊ မှန်နေလို့ပေါ့ဗျာ၊ မှန်နေလို့ပေါ့။
ငါတို့ကမှန်မှရတယ်ကွ..လို့ကြေါကျော်နေတဲ့သူတွေ၊ မှားတယ်ထင်တာကိုထောက်ပြကြည့်ပါလား? တစ်ခါတည်းအမှုန့်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်၊ တစ်ခါတစ်ခါတော့လည်း လူတွေအမှန်တရားကို အမှန်တကယ်ချစ်လာကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုမိတယ်၊ ကျီးကိုဒေါင်းပြော ဒေါင်းကိုကျီးပြောပြီး နေကြရတာကို သာယာနေလား၊ သမုဒ္ဒရာဝမ်းတစ်ထွာအတွက် ခွေးကို ခြင်္သေ့လို့ပြော တီကောင်မဟုတ်ပါဘူးကွာ နဂါးကြီးပါလို့ပြောနေရတာလား?
မှားနေတာကိုတော့မှားနေတယ်ပြောရင်၊ မခံခြင်တဲ့ပုထုဇဉ်သဘောကို သိကြလို့လား ကျနော်တွေးတုံးပဲ။
ရွှေ့လျားနေတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုယ်တိုင်က အတုတွေလား? ဘာအတွက်တစ်ဦးကိုတစ်ဦး လိမ်နေကြတာလဲ?
ဘာအတွက်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခု ညာနေကြတာလဲ? ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ ကိုးကွယ်ရာဘာသာတရား အားလုံးနီးပါး လိမ်ညာတာကို တားမြစ်ကြပေမဲ့၊ Followers တော့ ဒီတားမြစ်ချက်ကို အကြောင်းပြချက်ပေါင်းစုံနဲ့ ချိုးဖေါက်နေကြတာပဲလေ။
အကြောင်းရှာတော့..တစ်ခုတည်းပဲ၊ ငါကောင်းစားရေး ၀ါဒကရှေ့တန်းရောက်လာတာပါပဲ ငါကောင်းစားရေးဝါဒ အရှေ့တန်းရောက်လာတဲ့ အိမ်တစ်ဆောင်မှာ အိမ်ဆူတယ် ၊အလားတူပဲ ငါကောင်းစားရေးတွေရှေ့တန်းတင်လာတော့ ပြည်ဆူတယ်၊ နောက်ဆုံးကမ္ဘာစစ်ကြီးတွေဖြစ်လာတဲ့အထိ တရားခံက ငါကောင်းစားရေးဝါဒပဲ။
မရှိတဲ့ငါကိုရှေ့တန်းတင်မိခြင်းအမှားကို ကျနော်အပါအ၀င် ပုထုဇာဉ်အားလုံး ခံစားနေရတာပါပဲ၊ ကျနော်တို့ပုထုဇာဉ်သဘာဝကိုတိုင်က မာယာကိုမင်းမြှောက်ပြီး သစ္စာကိုခံချချင်နေကြတာလေ၊ တကယ်တော့ ဘု၇ားရဲ့တရားတော်ကိုယ်တိုင်က အသေကို ရှာပီး အသေလွတ်ရာကိုသွားတာလေ၊ ဒုက္ခကို သစ္စာမြင်အောင်ကြည့်ပြီး လွန်မြောက်ရာကိုသွားတာပါလေ၊ ကျနော်တို့လိုချင်တာက ၊တွေ့ချင်တာက၊ သုခ မှန်သမျှ၊ အစားကောင်း အသောက်ကောင်း အနေကောင်း ဆိုတဲ့လောကသတ်မှတ်ချက်တွေ၊။
အဲလိုကောင်းတာတွေလိုချင်တဲ့စိတ်ရယ်၊ မရှိတဲ့ငါကိုရှေ့တန်းတင်တာရယ်ပေါင်းလိုက်တော့ မလုပ်ရဲတာဘာမှမရှိ တော့၊ ဘာမှမမြင်တော့ဘူးလေ၊
ပုထုဇာဉ်တွေမှာ အမှန်တရားခါး၏ မုသားချို၏ တဲ့လေ။
စာရေးသူ ၊ luminnkhaung ၊ အချိန် 30.5.106ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ၊
လပြည့်နေ့…လသာတဲ့လပြည့်နေ့ပေါ့၊ ဟ… လပြည့်နေ့ပဲ လသာမှပေါ့လို့ ပြောရင်တော့ လမသာခဲ့တဲ့ လပြည့်ညတွေကို အမှတ်ရပေးစေချင်ပါတယ်၊ လပြည့်နေ့တိုင်း လသာခဲ့တာမှမဟုတ်ပဲလေ၊ အဲလိုပဲ ဘ၀ဆိုတာလဲ ပုံသေကားချပ်မှမဟုတ်တာ ၊မြင့်လိုက်နိမ့်လိုက် သွားလိုက်ပြန်လိုက်၊ပူလိုက်အေးလိုက် ၊ဆင်းရဲချမ်းသာ တလှည့်စီဖြစ်နေတာလို့ လူတိုင်းသိတယ်၊ သိသမှသိပ်သိ၊ဒါပေမဲ့ ဒဏ်တွေကိုတော့မခံနိုင်ကြဘူး
တချို့က ဆင်းရဲတဲ့ဒဏ်ကို မခံနိုင်ဘူး၊ တချို့က ချမ်းသာတဲ့ဒဏ်ကိုမခံနိုင်ဘူး၊ အမြင့်ဆုံးကလူ အောက်ဆုံးကို ရောက်ရင် ရူးတော့တာပဲ အနိမ့်ဆုံးကလူတွေ အမြင့်ဆုံးရောက်ရင် မေ့ကြတာပဲ၊ ဒါပေမဲ့ ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် လောကနဲ့မကင်းကြသူတိုင်းမှာ၊ လူဆိုပြီးတော့ အမည်နာမခေါ်ဝေါ်သမုတ်နေကြသူတိုင်းမှာ ကျေးဇူးတရားတွေနဲ့ ကင်းပြီးနေကြရတဲ့သူမရှိ ရှေးကလည်းမရှိ ယခုလည်းမရှိ နောင်လည်းမရှိ ၊ကျေးဇူးတရားနဲ့ ကင်းကြသူတွေမရှိကြပေမဲ့ ကျေးဇူးကန်းကြသူများကတော့ အတိတ် ပစ္စုပန် အနာဂတ် ကာလသုံးပါးစလုံးမှာတော့ ရှိနေကြတာပါပဲလေ။
ကျေးဇူးရှိခဲ့ဖူးသူများကို ကျေးဇူးဆပ်ချင်ပေမဲ့ မဆပ်နိုင်သေးတဲ့ သူများအတွက်စကားလက်ဆောင်ပေးချင်တဲ့စိတ်နဲ့ ဒီစာကိုရေးဖြစ်တယ်ဆိုပါတော့၊ အခုတလော ကျနော်ကိုယ်တိုင် လောကဒဏ်လှိုင်းတွေကြားမှာ အားတင်းကူးခပ်နေရတာကြာပါပြီ ၊ဒါပေမဲ့ငြီးနေလို့ဘာထူးမှာလဲ ကိုယ့်ဝန်ကိုယ်ထမ်းနေကြရတဲ့ လူတွေချင်းကိုယ်စီ အခက်ခဲတွေကိုကူညီပေးခဲ့ကြတဲ့ လူအဖြူရောင်တွေရှိလာတယ်၊ ဘယ်တော့မှ သူတပါးအကူအညီကို မယူဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ကျနော် မယူမနေရအခြေနေတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်လာရတဲ့အခါ၊ ရှက်အားငယ်စွာနဲ့ပဲ လက်ခံနေခဲ့ရတယ်၊ ပြီးတော့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်တွေးမိတာက ငါအစွမ်းစမဲ့ပြီလားဆိုတာပဲ၊တဘက်ကလည်း ပြန်တွေးမိတယ် ဒီကျေးဇူးတွေအတွက် ငါဘာပြန်လုပ်ပေးနိုင်မလဲပေါ့၊ စိတ်ချ..ကူညီတဲ့သူဘက်က ဘာကိုမှမမျှော်လင့်၊ တုံ့ပြန်မှုကိုမျှော်ပြီးကျေးဇူးပြုခြင်းမဟုတ်၊ ဒါကိုသိတော့ကျနော်ပိုရှက်လာတယ်၊ ငါဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲ? တွေးတယ်..တွေးပြီးနေမိတယ်၊ စားဖို့တောင်မှ အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့ကျနော့် အခြေနေက ဘာမှလုပ်မပေးနိုင်။
အဆင်ပြေလား၊ခလေးကော ကျောင်းအပ်ပြီးလား၊ မပြေရင်ပြော၊ လို့ဆိုလာတော့ပိုအရှက်ရသလို ပျောက်ဆုံးနေတဲ့မေတ္တာတရားကိုပြန်တွေ့လိုက်ရသလိုပဲ၊ ကျနော်အခက်ခဲဖြစ်မှ ရဟန်းလည်းမနေရ၊လူလည်းမနေနိုင်ဆိုသလိုပဲ၊
လူအမှုကဘုန်းကြီးပတ်ဖြစ်ရပုံက တောရဆရာတော်ကြီးပင်မနေနိုင်ဖြစ်ရတယ်၊ဒီကြားထဲ..ဟိုအခက်ဒီအခက်တွေကများ၊ထားတော့လေ၊ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရှက်ရှက်နဲ့ရေးတဲ့စာပေါ့ဗျာ၊ ဦးဥပသကာ အိမ်စရိတ်လောက်လား အလုပ်ကကကောဘယ်လိုလဲ? ဘာလုပ်ပေးရမလဲလို့ ထပ်မေးလာတော့၊ ကျနော့်အဖြေက ပြေပါတယ်ပေါ့၊ မပြေလည်းပြေရမယ်၊ ကျနော့် ဘက်က ဘာတခုမျှ အကောင်းမလုပ်ပေးဖူးခဲ့ပေမဲ့ သူ့ဘက်ကချည်းဆိုတော့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ လူယုတ်မာစာရင်းဝင်နိုင်တယ်၊
အမေ့ကိုဆေးခန်း အမှတ်201 မှာတင်ထားဆဲ ကျနော်ပဲလူစောင့်၊ကျနော်ပဲထမင်းချက်၊ ကျနော်ပဲရှာသင့်တာရှာ
ဇာတ်ရုပ်များနဲ့နေတဲ့နေ့၊ အမေအိပ်နေတော့ မဟာဗုဒ္ဓ၀င်ကြီးကိုဖတ်ရင်း ..ဖတ်နေတာကဖွားတော်မူခန်း ..သတိရမိတာက..မယ်တော်မိနတ်သားကို မြတ်စွာဘုရားကျေးဇူးဆပ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တော်၊သီတင်းကျွှတ်လပြည့်နေ့ လူ့ပြည်ဆင်း…..
အာ…ဟုတ်ပြီ..ဒါလောလောဆယ်ငါနိုင်တဲ့နည်း..လပြည့်နေ့တိုင်းဘုရားသွား…သန့်ရှင်းရေးကိုသေချာလုပ်၊ ကျေးဇူးရှင်တွေကိုအာရုံပြု ပဋ္ဌာန်းရွှတ်..။ ဘယ်နှစ်ခေါက်ဆိုတော့၊ အချိန်ရရင်၊ငါးခေါက် အချိန်မရရင်းသုံးခေါက်
ပြီးတော့ ကိုယ့်အပေါ်ကျေးဇူးပြုခဲ့တဲ့သူတွေကိုသေချာအမျှဝေ၊ သစ္စာပြု၊ အနည်းဆုံးကျေးဇူးရှင်တွေ အန္တာရာယ်ကင်းလိမ့်မယ်၊ လို့တွေးမိရင်း..ကျနော်လုပ်ဖြစ်တယ်။
ကနေ့လည်း..နယုန်လပြည့်နေ့၊ မဟာသမယနေ့ပေါ့လေ၊၊ နဂါးရစ်တောင်ဘုရားကိသွားပြီး ကျေးဇူးရှင်မွေးမိခင်ကြီးနဲ့တကွ..ကျေးဇူးပြုဖူသူအပေါင်းတို့၏ ဂုဏ်ကျေိးဇူးကိုမှန်းပဋ္ဌန်းရွတ် ပြီးတော့မှ ကိုယ့်ကိုတစ်ဆုပ်၊ တစ်လုပ်၊ ပေးကမ်းချီးမြှေက်ထောင်ပံ့ပေးသူ၊ တကြောင်း တစ်ဂါထာ၊စာတစ်လုံးမျှသွန်သင်ပေးသူများ အတွက်တစ်ခေါက်၊
ပြီးတော့ကမ္ဘာမြေကြီးနဲ့ နေမင်းလမင်း မိုးမင်း..တို့ကိုရည်စူးပြီးသံသရာအစဉ်ဆက်ကျေးဇူးပြုခဲ့ပြီးသူများအတွက် တစ်ခေါက်။
နေက်ပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုကူညီနေတဲ့ ကျေးဇူးရှင် (နာမယ်) သို့ (နာမယ်များ) ကိုတစ်ဦးချင်းခေါ် ပုံပေါ်အောင်ကြည့်
မောင်းထောင်ဆရာတော်ကြီး မေတ္တာပို့သလိုပေါ့ အလင်းဝန်းထဲထဲ့ပြီးပဋ္ဌန်းပစ္စယနိဒ္ဒေသကို ဖြည်းဖြည်းချင်းရွတ်။
အခုအချိန်မှာတော့ ကျန်ာလုပ်နိုင်တာလေးနဲ့ပဲ ကျေးဇူးဆပ်နေမိတာပါ၊ ဒီထက်မက လုပ်နိုင်သူများဒီထက်ပိုပြီးကျေးဇူးတရားကို ဆပ်နိုင်ကြပါစေလို့ ရိုးသားစွာဆိုရင်း။
စာရေးသူ ၊ luminnkhaung ၊ အချိန် 27.5.103ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ၊
အနောက်ဘက်ကတက်လာမဲ့ တိမ်မဲညိုကို ကျနော်မျှော်မိနေတယ် နေ၀င်ချိန်တိမ်တောက်ပြီး
လှနေတဲ့ဆည်းဆာကိုငေးကြည့်ရတဲ့ အခိုက်အတန့်ကို ကျနော်ချစ်ခဲ့ဖူးပါသည်၊ တိမ်တွေရောင်စုံနဲ့ နေ၀င်တဲ့အလှကို ကျနော်မက်မောခဲ့ဖူးပါသည် ပငိလယ်နားကလူမို့ လဆန်း တစ်ရက် နှစ်ရက်တွေမှာ ဒီရေတက်ချိန်တွေမှာ လှိုင်းခေါင်းဖြူတွေက ကမ်းကိုတိုက်ပြီးရေအ၀င် ငှက်ဇင်ယော်ကအလိုက်သင့်လှိုင်းစီး နေမင်းကြီးက တောင်စွယ်အ၀င် အနောက်မြောက်လေက အေးနေအောင်တိုက် ပင်လယ်က ရောင်စုံဖြစ်နေတဲ့အခိုက်ကို တရှိုက်မက်မက် ကျနော်ချစ်ခဲ့ဖူးပါ၏် ထိုသို့တွယ်တာခဲ့ဖူးချိန်က ကျနော် တိမ်မဲညိုတို့ကို မုန်းခဲ့ဖူးပါသည်၊ သူတို့ ကြောင့် ကျနော်ချစ်သော ရောင်စုံတိမ်တို့ပျယ်လွင့်ကွယ်ပျောက်ခဲ့ရသည်၊ တိမ်မဲညိုတို့လာသည်နှင့် လေပြေတို့သည် လေးရိုင်း၊ လှိုင်းကြက်ခွပ်လေးတို့သည် ကြောက်မက်ဖွယ်လှိုင်းလုံးကြီင်္းများအဖြစ်သို့ တခဏခြင်း ပြောင်းလွဲသွားတတ်ကြသည်၊ ငြိမ်သက်နေတဲ့ပင်လယ်ပြင်က ၀ုန်းဒိုင်းကြဲနေတဲ့ အမူးသမားတစ်ယောက်လို ယိမ်းထိုးလှုပ်ရှားလာတတ်ပြန်သည်၊ သည်လိုအချိန်မျိုးမှာ နေကွယ် လပျောက် တိမ်မှောက်ပြီးမှောင်နေတာကိုကျနော်မကြိုက်…သို့သော် အခုကျနော်သည် တစ်ခါတုံးက မုန်းခဲ့ဖူးသော တိမ်မဲညိုကို တမ်းတနေပါသည်။
လာမနိုးနိုးနဲ့ကျနော်အနောက်ဘက်ကိုမျှော်သည်တိမ်တွေဖြူနေတုံး၊အရှေ့ဘက်ကိုကြည့်ည် ကောင်းကင်ကြီးကပြာနေတုံး၊တစ်ချိန်တုံးကကျနော်မက်မောစွာငေးမောကြည့်ခဲ့ဖူးသော ကောင်းကင်ပြာကိုကျနော်မျက်နာလွဲပြီး တောင်ဘက်ဆီလှမ်းကြည့်ပြန်တော့ ဘော်ငွေရောင် အနားကွပ်နဲ့ တိမ်တွေတောက်နေတုံးပါလားဟယ်… ဟူး..ဘယ်ရောက်နေလဲ တိမ်မဲညို..လူတွေငိုတာမကြားရော့ထင့်။
လာချိန်တန်ပါလျှက် အိမ်ပြန်မရောက်တဲ့ သားကိုမျှော်နေသလို လူတွေနင့်ကိုမျှော်ကြတယ် တချို့ကလည်း အပြစ်တွေပြောကြတယ် တကယ်တော့နင့်အပြစ်လည်းမဟုတ် ငါတို့ရဲ့ အတောမသတ်နိုင်တဲ့လောဘက နင့်ကိုအိမ်ကလိုက်ထုတ်ပစ်သလိုဖြစ်နေတာကိုး နင့်အဖေါ်တွေဖြစ်တဲ့ အစိမ်ရောင်တောတွေကို ငါတို့က မျိုးတုံးပြီး အရောင်ပြောင်းခဲ့ကြတာလည်းပါတယ် ပြီးတော့ နင့်အိမ်ပြန်လာတာကိုကြိုဖို့ ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့
နင့်ကို ပြန်ခေါ်နိုင်တဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားက ငါတို့မှာမရှိဘဲ နင်ထင်ရာစိုင်းပြီပေါ့ လာချင်လာမယ် မလာချင်မလာဘူး..နင့်သဘောပေါ့လေ။ ဆင်ကိုနိုင်ဖို့ချွှန်းရှိရမယ်ဆိုတာကို ငါတို့သိပေမဲ့ နင့်ကိုနိုင်ဖို့ သီလရှိရမဲ့အစား တဏှာတွေကိုကြီးသထက်ကြီးအောင် ငါတို့မွေးမြူခဲ့ကြတာကိုးလေ။
လာခဲ့ပါတော့ တိမ်မဲညို။ လောဘကို အတောမသတ်နိုင်တဲ့ ငါ့လိုလူတွေကို နင်မကျေနပ်ရင်လည်းရှိပါစေတော့လေ၊ ဘာမှမသိအပြစ်ကင်းတဲ့ လူသေးသေးလေးတွေအတွက် နင်ပြန်လာပေးပါ။ ကောင်းကင်ကျောခိုင်း နားထိုင်းပြီးနေတဲ့ သက်ကြီးသူတွေအတွက်ပြန်လာပါ၊ မြေကြီးမှာနွားလိုရုံး ပြီးငါတို့စားမဲ့စပါးကို စိုက်နေတဲ့ ကျေးဇူးရှင်ကြီးများအတွက် ပြန်လာပါ။
တိမ်မဲညိုလာခါမှ ရွာချမဲ့မိုးကိုမျှော်ရင်း…အကျင့်ဖျင်းသထက်ဖျင်းလာတဲ့ ငါ့ကိုယ်ငါမုန်းတယ်။
အတောမသတ်နိုင်တဲ့ လောဘကိုရင်မှာပိုက်ပြီး အစိမ်ရောင်ကွင်းပြင်ကို အရောင်ပြောင်းမိတဲ့ ငါ့ကိုငါလည်းမုန်းတယ်။
စာရေးသူ ၊ luminnkhaung ၊ အချိန် 15.5.102ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ၊
အညွှန်း ၊ အတွေူး
စာရေးသူ ၊ luminnkhaung ၊ အချိန် 7.5.10 11 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ၊